Shiinaha Customized xidhxidhan Wasakhda kululaynta soo saareyaasha, warshad - Dongguan Guancheng qiraysa Hardware Co., Ltd.
Hoyga > Kulaylka > Kuleylka kuleylka kuleylka leh > Kuleylka kuleylka leh
Kuleylka kuleylka leh
Wuxuu qaataa kuleylka kuleylka nooca-xabagta, faafitaanka kuleylkaan badanaa waa aluminium ama daab bir ah, isticmaalka hagaha hagaha ama alxanleyda si loogu hagaajiyo jeexitaanka aaladda ama haanta hawsha, dhammaanteed waxaa la dhigaa salka kuleylka. Ha noqoto mid laga shakiyo.
1. astaamaha kuleylka kuleylka nooca-xabagta:
Waxay la mid tahay aluminiumka hadda ku shaqeeya hiitarka soo baxa ma jabin karo dhumucda daabkeeda iyo dhererka saamiga xadka, sidaas darteed isticmaalka hiitarka nooca xabagta ah, kala-baxa kuleylkaan badanaa waa aluminium ama baalasha naxaasta ah, isticmaalka hagaha hagaha ama Alxan si loogu hagaajiyo jeexjeexa qalabka ama nidaamka hawsha, dhammaantiis waxaa lagu dhejiyaa salka kuleylka. Ha noqoto mid laga shakiyo.
2. Faa’iidooyinka kuleylka kuleylka nooca u eg
Mashiinka kuleylka nooca-xabagta ah ayaa ka jabay saxanka gaaban ee aagga kuleylka kuleylka la soo saaray, iyo xaddidaadda ka shaqeynta ee kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka ee dhumucda daabka iyo dhererka waxay ka dhigi kartaa kuleylka kuleylka cufnaan sare. Waxyaabaha kala duwan ee qalabka kuleylka ayaa la dooran karaa, taas oo leh dabacsanaan gaar ah MOQ
3. Faa’iido darrooyinka finarka nooca xabagta
3.1 Isticmaalka koollada dariiqa kuleylka iyo kuleylka isku dhafka ee isku dhafan, salka daabku wuxuu yeelan doonaa dhibaato isdaba joog ah, iyo waxqabadka kuleylka kuleylka ayaa liita.
3.2 Koolladu waxay kuxirantahay qarashka shaqada, qiimaha waxsoosaarka badeecaduna aad ayuu u sarreeyaa
Calaamadaha kulul: Kuleylka kuleylka, Shiinaha, Gawaarida, Soo-saareyaasha, Warshad
Gali kuleylka kuleylka